Shiinaha Oak Dharka Oak Gawaarida Silent Slide Rail Sliding Albaabka Dharka Qolalka Dharka Jiifka # 0108 Soosaarka iyo Warshadda | Yamazonhome
Dharka Dharka Oak ee Oak Xajinta Aamusnaanta Iridda Tareenka Wadada Dharka Qolalka Dharka # 0108
Dharka Dharka Oak ee Oak Xajinta Silent Slide Rail Sliding Albaabka Dharka Qolalka jiifka # 0108
Lambarka nambarka: Amac-01 08
Cabir: 1600mm * 560 * 2000mm
Naqshadeynta-sameynta guriga u dhow dabiiciga
Ujeedkeenii asalka ahaa wuxuu ahaa inaan u abuurno guri casri ah fasalka dhexe ee Shiinaha. Qorax dhaca Waqooyiga Yurub si tartiib ah ha u iftiimiyaan guriga, naqshadaynta fudud laakiin aan fududayn waxay guriga ku celin doontaa quruxdiisa dhabta ah.
Geed cad ayaa laga keenay Waqooyiga Ameerika si loo sameeyo jir alwaax adag oo saafi ah
Xulashada adag ee qalabka waxaa kaliya loogu talagalay qalabka guryaha oo tayo sare leh, iyo miraha dhirta dabiiciga ah ee biyaha qulqulaya waxay keenaan niyadda wanaagsan iyo wanaagsan. Dharka weyn waxaa si toos ah loogu talagalay oo farshaxanku waa fiican yahay. Waxaan marka hore u jarnay qoryaha 5-11cm. Balaadhkani wuxuu damaanad qaadi karaa qoryaha. Alwaaxda xasiloon ayaa qalloocan waxayna muujin kartaa geedo alwaax ah oo dhammaystiran oo siman, ka dibna midabka waxaa xushay shaqaale qori khibrad leh. Badarka iyo sabuuraddu waa iswaafajiyeen.
Khaanad riix-jiido + qoryaha adag sudhan
Khaanadda soo jiidanaysa waxay la jaanqaadeysaa guddiga xayndaabka xagga hoose si kaydinta looga dhigo mid macquul ah oo hagaagsan. Waxyaabaha gaarka loo leeyahay ayaa lagu ridi karaa khaanadda, guddiga xayndaabkuna wuxuu sudhan karaa shukumaanno, garbasaarrada, iwm. Qalabka guryaha ayaa si gaar ah loogu qaabeeyey qalabka dhammaadka-sare leh oo leh noocyo kala duwan iyo qalab kala duwan. Si loo buuxiyo shuruudaha shaqooyinka iyo qurxinta kala duwan, dhammaantood waxay si adag u raacaan shuruudaha heerarka caalamiga ah, waxayna soo mareen tijaabooyin badan oo acid-base iyo corrosion ah si loo hubiyo in aan loo beddelin isticmaalka muddada-dheer.
Aammus carrabka ku duuban
Tareenka hagaha biraha, siman oo aamusan. Markasta oo aad furto oo aad xirto, waxaad yeelan kartaa jawi deggan oo wanaagsan. Qaybta dhinaca waxay dheereyneysaa 10mm waxayna ku habboon tahay jiritaanka albaabka xirmada. Marka albaabka sibidhku xirmo, ma jiro wax bannaan iyo habaas.
Isbarbar dhig bilaash ah golaha wasiirada
Marka la eego golaha wasiirada sare, booska toosan ayaa loo isticmaalaa in ka badan, iyo dhibaatada kaydinta dharka xilliyada aan caadiga ahayn waxaa xalliya hal wasiir oo sare. Isku-ballaadhinta ballaadhintu waa "nidaamka is-ilaalinta" ee alaabada adag ee alwaaxa, waxaana loo habeeyay si ay ula qabsadaan alwaax adag jawi kala duwan. Nidaamka wax soo saarka si adag ayaa loo xakameeyaa, khibrada wax soo saarkuna waa hodan. Ka dib nidaamyo badan oo shiidi iyo shiidid ah, dusha sare ee badeecada la dhammeeyay waa mid wareegsan oo siman.
Ma jiro naqshad lugta golaha wasiirada ah
Qaybaha muhiimka ah waxaa isku xira hannaan dhaqameedka tenon iyo tenon, qaabdhismeedkuna wuu ka sii adag yahay, xirmooyinka adagna waxay si wax ku ool ah u wanaajin karaan xasilloonida dharka iyo sii dheereynta nolosha adeegga. Saldhigga sagxada-hoose waa xasilloon yahay oo nadiif ma aha, cirifkuna wuxuu qaataa qaab dhismeed gudaha ah si looga fogaado dhaawaca ku soo boodka ah ee isticmaalka maalinlaha ah.
Hore: Dhamaan Laabta Qoryaha adag ee Khaanadaha Qolka Nasashada Qolka Jiifka # 0103
Xiga: Qaab Fudud oo Reer Galbeed ah oo Siraaji ah oo Sariir Qolka Jiifka ah Sariirta Guryaha # 0109
Telefishinka Guryaha Yaryar ee Casriga ah ee Casriga ah ee Fudud ...
Fashion qol fadhiga yar oo alwaax adag ...